Indlela ukufaka FSX on Windows 8 / 8.1 / 10?
Ukuze ufake FSX (zonke izinguqulo) on Windows 8 / 8.1, landela lezi zinyathelo:
1- Faka FSX ngokujwayelekile ne DVD.
2- Lapho ukufakwa phezu, chofoza ngakwesokunene «fsx.exe» (ungazithola lapha: C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Imidlalo \_ Microsoft Flight Simulator X). Lapha, ukukhetha «Oluvumelana» ithebhu bese usetha up iwindi njengoba kukhonjisiwe ngezansi:
3- Download 32 Bits version of « UIAutomationCore », Unzip ifayela bese unamathisela kufolda FSX eziyinhloko (C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Imidlalo \_ Microsoft Flight Simulator X \_). It uyolungisa inkinga izingozi ezingalindelekile FSX.
Manje, ngemva kwalezi zinyathelo kancane, FSX kufanele zizinze phezu Windows 8 / 8.1 futhi 10